Zvinhu zvinogadzirwa nehuipi: hunhu, mashandisiro uye zvakanakira | Green Renewables
ChiGerman Portillo | | Kudzokorora
Takatarisana nedambudziko rakakomba repasirese ratinahwo nekusvibiswa kwepurasitiki, iyo biodegradable zvinhu. Izvo zvinhu zvinowora nekutenda nekupindira kwezvisikwa zvipenyu zvakaita sefungi uye zvimwe zvipuka zviripo mune zvakasikwa. Nekuda kweizvi, ivo havabatike muvhu kana mune chero svikiro uye havasvibise. Iyo yekuora maitiro inotanga nehutachiona hunoburitsa ma enzymes uye hunofarira shanduko yechigadzirwa chekutanga muzvinhu zvakapusa. Chekupedzisira, ivhu rese microparticles inowedzerwa zvishoma nezvishoma.
Neichi chikonzero, sezvo zvigadzirwa zvinogadziriswa zvigadzirwa zvave kuve zvakakosha, isu tichaisa iyi chinyorwa kukuudza zvese zvaunoda kuti uzive nezvavo.
1 Ndezvipi zvinhu zvinogadziriswa zvigadzirwa
2 Mhando dzezvinhu zvinogadziriswa zvigadzirwa
2.1 Mapurasitiki kubva kune starch uye rye
2.2 Biodegradable synthetic uye zvakasikwa mapurasitiki
2.3 Mapepa uye machira echisikigo
3 Zvakanakira zvigadzirwa zvinogadziriswa zvigadzirwa
Ndezvipi zvinhu zvinogadziriswa zvigadzirwa
Biodegradable zvinhu zvinoonekwa seizvo zvese izvo zvinhu zvinowora nekuda kwekupindira kwefungi uye zvimwe zvipuka zviripo mune zvakasikwa. Kana chinhu chikarwiswa nebhakitiriya, maitiro ekuora anotanga, ayo anoburitsa ma enzymes kubatsira kushandura chigadzirwa chekutanga kuita zvinhu zviri nyore. Chikamu chekupedzisira chinosanganisira kutora zvishoma nezvishoma zvikamu kubva muvhu.
Kune rimwe divi, izvo zvinhu zvisingawori zvinongogara muvhu uye zvinoparadza iyo ecosystem. Zvizhinji zvemazuva ano zvekugadzira zvinhu hazvina mabhakitiriya anogona kuzvishandura, saka vanoramba vakamira nekufamba kwenguva, vachisvibisa nharaunda.
Neraki, kufambira mberi kwesainzi kwakatibatsirawo mune ino ndima, kugadzira zvigadzirwa zvehupenyu uye zvinogadziriswa zvinogadziriswa zvinogona kutsiva izvo zvino zvapera kushanda uye zvinokuvadza. Kudzivirira kuunganidzwa kwemakemikari asiri-anogadziriswa zvinhu zvakasikwaMhinduro mbiri dziri kuongororwa izvozvi: kushandisa midzi kana tupukanana tusingaoneki twunogona kurwisa zvigadzirwa zvinoonekwa sezvisingaodza moyo, kana kugadzira zvigadzirwa zvinogona kuve zvinogona kuora nematanho akajairika.
Nenzira iyi, kuunganidzwa kwezvinhu zviri kutora nzvimbo zuva rega rega papasi redu, uye kuti vanhu vazhinji vasingazive nezvazvo, zvinogona kupera kamwechete zvachose, kana kudzora zvakanyanya kumwe kurongedza, mapepa, zvishandiso, nezvimwe. Iwe haufanire kumirira kwemakore akati wandei kusvikira zvanyangarika zvachose zvine muviri.
Mhando dzezvinhu zvinogadziriswa zvigadzirwa
Ngatione kuti ndezvipi zvakajairika uye zvinonyatso kuzivikanwa biodegradable zvinhu:
Mapurasitiki kubva kune starch uye rye
Mapurasitiki anogadzirwa nehuviri akagadzirwa nechibage kana starch yegorosi parizvino iri kugadzirwa pamwero weindasitiri, semuenzaniso kugadzira masaga emarara. Kushatiswa kwemapurasitiki aya kunogona kutora mwedzi mitanhatu kusvika makumi maviri nemana, pasi pevhu kana mumvura, zvinoenderana nekumhanya kunoiswa starch.
Saizvozvowo, mapurasitiki akazara anogadzirwa neyakagadzirwa kubva kurye kana kumanikidzwa tambo anogona kutsiva peturu-yakavakirwa mapurasitiki. Imwe yadzo yakavakirwa pa rye starch uye inouya iri muchimiro che granular zvinhu izvo zvinoshandiswa kugadzira ndiro. Kuchinja kurongeka uye kuita kwepurasitiki, maitiro ehunyanzvi senge density, elastic modulus, tensile simba, deformation inogona kuwanikwa, nezvimwe. Izvo zvivakwa zvezvinhu izvi zvakafanana chaizvo neizvo zvakajairwa ma polymers e petrochemical mavambo.
Biodegradable synthetic uye zvakasikwa mapurasitiki
Muboka iri, mune mamwe marudzi ema polymer ekugadzira anogona kudzikisira zvakasikwa kana nekuwedzera zvinhu zvinogona kukurumidza kudzikisira. Aya mapurasitiki anosanganisira okisijeni-inogadziriswa mapurasitiki uye poly (ε-caprolactone) (PCL). Biodegradable oxidative mapurasitiki epurasitiki dzakagadzirwa, umo makemikari ekuwedzera anosimudzira oxidation anowedzerwa mukuumbwa kuti atange kana kumhanyisa maitiro ekudzikisira oxidative kugadzira zvigadzirwa zvinogadzirwa nehuviri. PCL inogadziriswa biodegradable uye biocompatible thermoplastic polyester inoshandiswa mukushandisa kwekurapa.
Natural polymer inogadziriswazve, inonziwo biopolymers, inogadzirwa kubva kuzvinhu zvinowanikwazve. Zvimwe zvezvigadzirwa zvatataura zvinosanganisira polysaccharides inogadzirwa nemiti (chibage starch, mufarinya, nezvimwewo), polyester inogadzirwa nehutachiona (kunyanya mabhakitiriya akasiyana siyana), yakasikwa rabha, nezvimwe.
Mapepa uye machira echisikigo
Isu tinoshandisa bepa neimwe nzira muhupenyu hwedu hwezuva nezuva, iyo inogona zvakare kuve inogadziriswa zvinhu. Vanogona kunge vari mapepa matauro, naputi, zvinyorwa, mapepanhau, tsamba dzeposvo, kraft mapepa, mapepa, matikiti ekupaka, mapepa mapepa nemikombe, mafomu uye mafomu, kana kunyange zvinyorwa zvinobatsira. Sezvo isu tese takakomberedzwa nepepa, wadii kurishandisa zvakare?
Unogona kuchinjira kuzvipfeko zvakagadzirwa kubva kumakemikari anozivikanwa uye donje, jute, rineni, mvere, kana machira esirika. Pamusoro pe silika, machira echisikigo akadhura, akasununguka kupfeka, uye nekufema. Kusiyana nemachira ekugadzira, machira echisikigo anogadziriswa zvigadzirwa uye haafanire kuita maitiro ekugadzira. Mazhinji mabhenefiti ezvigadzirwa izvi ndeekuti anoputsa zviri nyore uye haaburitse chepfu nezvigadzirwa. Kune rimwe divi, nylon, polyester, lycra, nezvimwe. Izvo zvinogadzirwa nekugadzirwa kwekugadzira uye ndeemicheka isingagadzirisike.
Zvakanakira zvigadzirwa zvinogadziriswa zvigadzirwa
Kune zvakawanda zvakanakira kushandisa biodegradable zvinhu. Ngatione zvavari:
Hazvibudisi marara: Izvo zvinhu zvakasikwa zvakakwana zvinogona kudyiwa nemajemikari pasina kuoma, ndosaka ndichiashandisa kuti ndiite muhupenyu hwangu. Naizvozvo, haiburitse tsvina nekuti haigare mumarara kana marara kwenguva refu.
Hazvigadzi kuwanda kwenzvimbo dzekuviga. Idzo igadziriso huru kumatambudziko epakati aripo mukuzadza kwenzvimbo, nekuda kwekuunganidzwa kwezvinhu zvisina-biodegradable zvinhu.
Izvo zviri nyore kugadzira uye kushandisa: Iwe unogona kugadzira chero chinhu chine biodegradable zvinhu pasina kudzikisira iyo mhando.
Izvo hazvina zvine chepfu: kushandiswa kwezvinhu zvinogadziriswa zvigadzirwa hakubvumidze kutsamira kwakadaro pakushandiswa kwezvimwe zvinhu zvinoda simba rakanyanya kushandiswa uye kusvibiswa kwakanyanya.
Izvo zviri nyore kudzokororazve: zvinoshandiswazve uye hazvidi matanho akaomarara ekurapwa kwavo.
Zviri fashoni: Iwo musika uri kuwedzera uye zvakanyanya uye zvakawanda zvinozivikanwa nezvazvo.
Havasvibisi: Kana isu tikataura nezve marara avo, zvigadzirwa zvinogadziriswa zvigadzirwa zvine mashoma maitiro kune iyo nzvimbo uye ecosystem.
Inoita iwe uve unotsigira: Iyo inzira yakanaka yekuita pamberi pechisikwa nehupenyu sezvo isu tiri kubatsira mukuchengetedza nharaunda uye isu tiri kubatsira kugadzira kusimudzira kusimudzira.
Ndinovimba kuti neruzivo urwu iwe unogona kudzidza zvakawanda nezve biodegradable zvinhu uye maitiro avo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Green Renewables » Environment » Kudzokorora » Biodegradable zvinhu
Musiyano uripo pakati pemavhairasi uye mabhakitiriya